guta : Murdoch
Musakanganwa kuti kurukura Murdoch University
Kunyoresa pa Murdoch University
Murdoch University ari pose azivikanwa chevanorwara tsvakurudzo-vakatorwawo pamwe chete runoenderana pakudzidza.
vadzidzi vedu vanoshanda pamwe nyanzvi vatsvakurudzi kuti vazoita zvikuru dzinonetsa matambudziko pose.
Vakapedza kudzidza kwedu anotsvakwa nebasa uye maindasitiri somugumisiro yepamusoro dzidziso, multidisciplinary dhigirii mubatanidzwa, tsvakurudzo vaitungamirira-kumucheto uye akakodzera kudzidza chaiyo-nyika.
Pana Murdoch University muPerth, Ositireriya, tiri kudada kuva kupfuura 22,000 vadzidzi uye 2,000 tsvimbo kubva mhiri 90 nyika dzakasiyana aine chido kuziva, shandisa zvavaifunga uye pakupedzisira mutsauko.
Tinotoona vakasununguka mafungiro uye kukurudzira edu Murdoch munzanga kugoverana pfungwa, dziva ruzivo uye kuwana nzira itsva nemafungiro. Nechepakati Australia, Tiri kuzivikanwa kudzidzisa rakaisvonaka, pasi-nepakumedura kutsvakurudza uye nhamba yedu yakakwirira kugutsikana vadzidzi.
In Western Australia, yedu South Street kembasi ane zvakawanda zvivako kusanganisira misoro Vet muchipatara (pamwe WA chete equina uchishandisa dzemitambo), ouinjiniya mutyairi wendege chirimwa, munhu Chiropractic kukiriniki, Media Arts centre uye zvakawanda. Tinewo pazvikoro kuSingapore, pakatarisana National Library iri dzidzo nomusimboti, uye Dubai apo kwedu vadzidzi kushandisa mamiriro-of-the-nounyanzvi TV uye redhiyo Studios, mumapepanhau nemunhepfenyuro uye fora Inn.
Tava kuzivikanwa somumwe rokuAustralia kutungamirira tsvakurudzo nemasangano, sezvo mamwe maindasitiri vanoisa kutenda kwavo uye pfuma kunyika mabasa edu kugovera kwedu pakutsvakurudza musarudzo uye masayendisiti pamwe mukana kuti zvakawanikwa zvinoshamisa.
Murdoch anoona mukana vadzidzi ayo kutora chikamu mune dzimwe muchimiro-chokuita basa chiitiko sechinhu chakakosha chimiro kudzidza chinokosha kuti mumwe nomumwe kosi dzedu. YeYunivhesiti Work Integrated Learning (UCHIDA) Program anotsvaka kugovera chinokosha pakudzidza chiitiko vadzidzi, apo nokuvabvumira kuratidza unyanzvi hwavo kudzidza kuti vashandirwi.
Unoda kurukura Murdoch University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Join kukurukura pamusoro Murdoch University.